Wasiirka cusub Warfaafinta Soomaaliya oo la dhaariyey (Sawirro) - Ceelhuur Online
Home > Wararka Maanta > Wasiirka cusub Warfaafinta Soomaaliya oo la dhaariyey (Sawirro)
June 2, 2018 admin614
Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan ayaa ka qeyb galay dhaarinta Wasiirka Cusub ee Wasaarada Warfaafinta Soomaaliya Mudane Daahir Maxamuud Geelle.
kulanka waxa uu ka dhacay Xarunta Villa Hargeysa, waxana goobjoog ka ahaa guddoomiye ku xigeenka koowaad ee Golaha Shacabka Mudane C/weli Sheekh Ibraahim ( Muudeey ), qaar ka mid ah guddiyada joogtada iyo Xoghayaha guud ee Golaha Shacabka Mudane C/kariin Xaaji Cabdi (Buux).
Xildhibaan Maxamuud Macalin Yaxye oo ah guddoomiyaha guddiga xeer hoosaadka iyo anshaxa ee Golaha Shacabka ayaa Wasiirka cusub dhaariyay.
Dhaarinta ka dib ayaa guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Mursal Sheekh c/raxmaan waxa uu wasiirka cusub kula dardaarmay inuu si wanaagsan shaqadiisa u guto.
waxa uu sidoo kale sheegay in wasiirka cusub loogu baahan yahay in uu ka shaqeeyo hormarinta Warbaahinta Qaranka iyo xoojinta xiriirka warbaahinta madaxa banaan iyo dowladda.
” Soo dhawaw Wasiir, runtii waxaa tahay Nin aqoon u leh shaqada warbaahinta waan aaminsanahay inad ka soo bixi karto howshan, Golaha Shacabka waajibaadkiisa korjoogteynta ah wu gudanaya Insha ALLAH” ayuu yiri Guddoomiyaha.
Wasiirka Cusub ee Wasaarada Warfaafinta Soomaaliya Mudane Daahir Maxamuud Geelle ayaa balan qaaday inuu si sax ah ugu soo bixi doono xilka loo dhaariyay, kana shaqeyn doono sidii wada shaqeyn dhaw uu ula yeelan lahaa guddiyada Golaha Shacabka ee wasaaradiisa wada shaqeynta kala dhaxeyso.
Ugu dambeyn Xildhibanaadii goobjooga ka ahaa kulanka ayaa Wasiir Daahir Maxamuud Geelle ugu hambalyeeyay xilka loo magacaabay, una rajeeyay inuu Alle ku amaansado.
Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya oo soo gaaray Muqdisho SAWIRO;